Acino Amino na Nri ha, Boric Acid na Borate - Balmxy
mgbe niile inweta nke kacha mma
Nweta nlele na akwụkwọ eserese n'efuGaanụ
Shanghai Balmxy Pharmaceutic Co., Ltd ka e guzobere na Febụwarị 2010. N’ọnwa Julaị afọ 2019, ụlọ ọrụ ahụ ka amụrụ ọkwa dị ka ụlọ ọrụ kacha elu mba.
Yulọ ọgwụ Xinyuan bụ ụlọ ọrụ teknụzụ na-apụta apụta na R&D, mmepụta na ire ahịa kemịkal na API dị mma. Companylọ ọrụ ahụ enweela ụlọ ọrụ R&D dị elu na ụlọ ọrụ nyocha mma, ụlọ ọrụ ụgbọ elu ọkọlọtọ na ntọala amụrụ. Companylọ ọrụ ahụ nwekwara ọtụtụ ngwaahịa mepụtara maka onwe ha, ma nwee ike zụlite ma hazie ụdị ụdị API na ọgwụ dị iche iche dịka mkpa ndị ahịa si dị.
nyochaa anyị ọrụ bụ isi
Ntinye aka na njikwa akara dị elu na ndị ahịa ọkachamara na enyemaka.
Boric acid na borate ...
Heterocyclic onyinye ...
Njirimara ndị ọzọ ...
Kemgbe e guzobere ya, ụlọ ọrụ anyị na - emepụta ngwaahịa mbụ nke ụwa na-agbaso ụkpụrụ nke ịdị mma na mbụ. Ngwaahịa anyị enwetawo aha dị mma na ụlọ ọrụ yana oke ahịa n'etiti ndị ahịa ọhụụ na ndị agadi ..
site na nchịkwaỌgọst-10-2020
Ndepụta nke oru ngo a chọrọ na Shanghai maka 2020 “Science and Technology Innovation Action Plan” Technology Innovation Fund (Batch nke abụọ)
上海市 2020 年度 “科技 创新 行动 计划” 科技型 中小企业 技术 创新 资金 清单 清单 清单 清单 Pịa iji lee ndepụta ahụ
Nkwupụta na ndepụta nke onyinye ndị a tụrụ atụ maka ụlọ ọrụ dị elu dị na Songjiang District na 2019
Dabere na mmụọ nke akwụkwọ ahụ "Songjiang District na Accelerating Development of High-tech Enterprises in the G60 Science and Technology Corridor" (Husong Fugui  Nọmba 23), a na-atụ aro ịnye 2019 Songjiang District High-tech Enterprise. Onyinye na Nkwado nye 52…
Na [Shanghai] N’afọ 2020, a na-eme atụmatụ ịnakwere ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka inyocha ihe ngosi nke Shanghai
Dika “Shanghai Municipal Enterprise and Institution Patent Work Pilot Ngosipụta itlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nghọta na Nchịkwa” (Shanghai Zhiju ﹝ 2017 ﹞ 62), ọ gafere nyocha ndị ọkachamara na usoro ndị ọzọ, ndị Kọmitii Party nke Municipal Intell na-enyocha ya. ..
site na nchịkwaJun-30-2020
A ga-eme ogbako mba nke iri abụọ na kọmpụta nke kemịkalụ nke kemịkalụ ahụ na nyocha nke ọkụ elekere nke Chinese Chemical Society na Taiyuan, Shanxi County na July 15-17, 2020. Ọ bụ ndị ọrụ China Chemical Society na-akwado ya, ndị Kọmitii Ndị Ọkachamara nke Kọmịị nke Ọchịchị na-akwado. Temomodu…
Nzukọ Ndị Na-ahụ Maka Chinese na 2020 Seminar na Inorganic Chemistry na Chemical Engineering na Central na Western China
Ndị otu kọmịkọ nke Injin na-ahụ maka Chemistry nke Inorganic Chemistry na Mahadum Lanzhou na-akwado, “Seminar nke Chinese Chemical Society na inorganic Chemistry na Chemical Engineering na Midwest nke 2020 ″ ga-enwe na Lanzhou n'August 14-17, 2020 Univ. ..